Dagaalki Russka-Jabaan - Wikipedia
Russia iyo Japan
Boqortooyada Ruushka iyo Boqortooyada Japan waxay ku dagaalameen diinta boqortooyada ee Manchuria iyo Kuuriyada Koonfureed (Japanese-Japanese War). Tiyaatarka ugu waawayn ee howlgalada ayaa ahaa Liaodong Peninsula iyo Mukden oo ku yaalla koonfurta Manchuria iyo xeebaha kuyaala Korea, Japan iyo Bada Badda. Ruushku wuxuu doortay deked biyo-diiran oo ku taala Badweynta Baasifigga ee badda iyo xeebaha. Vladivostok wuxuu shaqeynayay kaliya xagaaga, halka Port Arthur, oo ah saldhig milatari oo kuyaal gobolka Liaodong ay u kiraysatay Ruushka ee Shiinaha, waxay shaqeynaysay sanadka oo dhan. Tan iyo dhammaadkii dhammaadkii dagaalkii koowaad ee Sino-Japanese ee 1895, Japan wuxuu ka cabsi qabay Ruushka qorshaha ay ku doonayso in uu abuuro saameyn ku yeelashada Korea iyo Manchuria. Ruushku wuxuu soo bandhigay siyaasad balaadhin ah oo ku saabsan bariga fog ee Siberian laga bilaabo xukunkii Ivan ee ahaa Argagaxii qarnigii 16aad.  Japan oo ka soo horjeesatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Japan, wuxuu u yaboohay inuu aqoonsado xukunka Ruushka ee Manchuria isaga oo beddelaya aqoonsiga Kuuriyada Kuuriya oo ku dhex jira saamaynta Japan. Ruushku wuu diiday oo dalbaday Kuuriyada Waqooyi ee u dhigma 39-ka mid ah inuu yahay meel dhexdhexaad ah oo u dhexeeya Ruushka iyo Japan. Dawladda Japan ayaa u aragtay hanjabaado Ruush ah qorshayaasheeda ku ballaarinta Aasiya oo waxay doorteen inay dagaal galaan. Ka dib markii wadahadaladii burburay 1904, Jabaanku wuxuu furay colaadaha isaga oo weeraray Ruushka Bari ee Ruushka ee Port Arthur, Shiinaha, weerar weerar ah.
Ruushku waxa uu ku guuldareysatay dhowr jeer Japan, laakiin Tsar Nicholas II ayaa ku qanacsanaa in Ruushku uu ku guuleysan lahaa oo uu doortay inuu ku sii jiro dagaalka; markii ugu horreysay, si ay u sugaan natiijada dagaallada badda ee qaarkood, iyo ka dib si loo ilaaliyo sharafta Ruushka iyadoo ay ka hortagayso "nabadda xun". Ruushka wuxuu iska indha-tiray Japan horayba si ay u ogolaato gacan-ku-dhiiglaha waxayna diiday fikradda ah in khilaafka u keeno Maxkamadda Xalinta Khilaafaadka ee Hague. Dagaalku wuxuu ku dhammaaday heshiiskii Portsmouth, oo dhexmaray Madaxweynaha Maraykanka Theodore Roosevelt. Guuldaradii dhamaystiran ee ka soo baxday Jabhadii Jabuuti ee ku-meel-gaadhka ahaa ee la yaabay Cadaadisku wuxuu bedelay dheellitirka awoodda Bariga Aasiya, taasoo keentay in dib loo qiimeeyo soo galitaanka dhowaan Japan ee marxaladda adduunka. Waxay ahayd guushii ugu horreysey ee millatariga ahayd ee taariikhda casriga ah ee Awoodda Aasiya ee ku wajahan Yurub. Culimada waxay sii wadaan inay ka doodaan muhiimadda taariikhiga ah ee dagaalka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagaalki_Russka-Jabaan&oldid=189909"
Last edited on 24 Jannaayo 2019, at 22:17
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Jannaayo 2019, marka ee eheed 22:17.